कसरी रक्तचाप घटाउने छिटो र स्वाभाविक | चेकअप - स्वास्थ्य शिक्षा | अगस्ट 2021
समुदाय समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस समुदाय, कल्याण
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> कसरी चाँडो र प्राकृतिक रक्तचाप कम गर्ने
जब कसैलाई उच्च रक्तचाप हुन्छ, जसलाई उच्च रक्तचाप पनि भनिन्छ, यसको मतलब तिनीहरूको रगत धमनीको पर्खालहरूको विरूद्ध धेरै बलको साथ पम्प गर्दैछ। अवस्था अन्ततः हृदय रोग, स्ट्रोक, वा अन्य हृदय सर्तहरू निम्त्याउन सक्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा उच्च रक्तचाप धेरै सामान्य छ। मुलुकमा १० करोड people० लाख भन्दा बढी मानिससँग यो छ र धेरैलाई थाहा छैन यो उनीहरूको उच्च छ भनेर पनि थाहा पाउँदैन किनकि यो एसिम्प्टोमेटिक हुन सक्छ, एमडी जोन ओस्बोर्न भन्छन्। न्यूनतम केन्द्र / HerKare र अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (एएचए) का लागि एक स्वयम्सेवक।
कारण धेरै व्यक्तिलाई थाहा छैन? त्यहाँ उच्च रक्तचापसँग सम्बन्धित धेरै वा कुनै लक्षणहरू हुँदैनन्, स्रोन्ड्रा डेपल्मा भन्छन्, हृदय रोग चिकित्सक सहायक Pinnना हेल्थ कार्डियोवास्कुलर संस्थान UPMC Pinnना साथ ह्यारिसबर्ग, पेन्सिलभेनियामा, त्यसैले किन यसलाई 'मौन हत्यारा' भनिन्छ।
यदि तपाईं रक्तचाप कसरी कम गर्ने भनेर सोचिरहनु भएको छ भने, भाग्यवस, उचित आहार र स्वस्थ जीवनशैली परिवर्तनको साथ त्यसो गर्न प्राकृतिक तरिकाहरू छन्।
राम्रो रक्तचाप के हो?
एक राम्रो, सामान्य रक्तचाप पठन - बसिरहेको बेला लिईन्छ, रक्तचाप कफको साथ १२०/80० हुनुपर्दछ। पहिलो नम्बर सिस्टोलिक रक्तचाप हो (पिट्ने क्रममा तपाईंको मुटुले कति दबाब दिन्छ), र दोस्रो डायस्टोलिक रक्तचाप हो (धड्कनबीचको बीचमा तपाईंको धमनीहरूमा कति दबाव हुन्छ)। त्यसमाथि कुनै पनि चीज या त उन्नत वा उच्च मानिन्छ।
ती संख्या १ across बर्ष भन्दा माथिका वयस्कहरूको लागि बोर्डमा लागू हुन्छन्, डा। ओसबोर्न भन्छन्। उनी भन्छन कि दशकौं अघि राम्रो रक्तचाप संख्या उमेरका आधारमा फरक छ, केही मानिस अझै पनी सीमित छन्। तर वास्तविकतामा, यो सबै १२०/80० मा मानकीकृत छ।
अल्पप्राजोलम ०. mg मिलीग्राम यो कति लामो हुन्छ
उच्च रक्तचापको विशाल बहुमत वयस्कहरूमा छ, उनी भन्छन्। यो उमेर भन्दा स्वतन्त्र छ। तपाईं २१ वा 81१ हुनुहुन्छ भन्नेले फरक पार्दैन। नम्बरहरू समान छन्।
वयस्कहरूको लागि, त्यो हो। बच्चाहरूको लागि, यो केही फरक छ। रक्तचाप संख्या जनसंख्या र उमेरमा आधारित हुन्छ, र सामान्यतया वयस्कहरूको तुलनामा कम हुन्छ। बच्चाहरूको लागि त्यहाँ दिशानिर्देशहरूको एक मानकीकृत सेट छैन, तर पक्कै यदि तपाईं यस्तो बच्चा भेट्टाउनुभयो जुन बारम्बार रक्तचाप छ भने वयस्क वर्ग अनुसार उच्च हुनेछ, डा। ओसबोर्न बताउँदछन्।
रक्तचापको खतरनाक स्तर के हो?
जहाँसम्म उच्च रक्तचापका लागि निर्दिष्ट नम्बरहरू छन्, अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन र अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीले नोभेम्बर २०१ in मा अद्यावधिक दिशानिर्देशहरू जारी गर्‍यो। यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ: उन्नत र उच्च।
उन्नत रक्तचाप १२१/80० देखि १२ / / from० सम्म हुन्छ। यो सामान्यतया उपचार गरिँदैन, तर यो एक चेतावनी संकेतको रूपमा अधिक कार्य गर्दछ कि यसलाई अनुगमित गरिनु पर्छ र बिरामीले जीवनशैली परिवर्तन गरेर रक्तचाप कसरी कम गर्ने भनेर पत्ता लगाउन सक्छ।
उच्च रक्तचाप १/०/80० वा माथि सुरू हुन्छ - त्यो पहिलो चरण हो। चरण दुई, वा सबैभन्दा खराब डिग्री, १/०/90 ० र माथि छ। यदि रक्तचापको माथिल्लो सीमा १ than० भन्दा बढी छ भने, त्यत्तिकै खतरनाक हुन थाल्छ, तत्काल हार्ट अट्याक, हार्ट असफलता, वा स्ट्रोकको सम्भावना बढाउँदै।
मेरो रक्तचाप कम गर्न म के खान सक्छु?
त्यहाँ वास्तवमा हृदय स्वास्थ्य को लागी डिजाइन गरिएको एक विशिष्ट ड्याश DASH डाइट हो। यो उच्च रक्तचाप रोक्नको लागि आहार दृष्टिकोणको लागि खडा छ र स्वास्थ्य को राष्ट्रीय संस्थानहरु द्वारा विकसित गरीएको थियो। डाएस डाइट पछ्याएपछि (जुन आवश्यक रूपमा भूमध्यसागरीय आहार हो जसमा थोरै फ्याटयुक्त डेअरी थपिएको छ) रक्तचाप कम पनी प्रभाव पारी प्रभाव पार्ने औषधीको रूपमा लिन सक्छ, डा। ओसबोर्न भन्छन्। यसले म्याग्नेशियम, पोटेशियम, र क्याल्सियमको मात्रा कम हुने खानालाई हाइलाइट गर्दछ, जबकि नुन र सोडियम सेवन सीमित गर्दै। यहाँ डाईटमा के खानुहुन्छ भनेर केही छ।
नट र बीउहरू
मध्यम डार्क चकलेट
सबैभन्दा ठूला चीजहरू भनेको केटाकेटीहरू हुन् - अतिरिक्त सोडियम (दिनको लगभग १,००० मिलीग्राम घटाउने सोडियमको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, डा। डेपल्मा भन्छिन्), प्रशोधित खाद्य पदार्थ, चिनी, मसला (जुन प्राय: नुन र चिनीले भरिएको हुन्छ), रोटी, र चीज
एप्पल साइडर सिरकालाई उच्च रक्तचापको उपचारका रूपमा लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको छ, तर डा। ओसबोर्नले टिप्पणी गरे कि कुनै पनि व्यापक क्लिनिकल परीक्षण वास्तवमै कत्तिको प्रभावकारी छ भनेर निर्धारण गर्न सक्षम भएको छैन। यो भनिरहेको छ, ऊ बिरामीहरू यो प्रयास गरिरहेको बिरूद्ध छैन - यदि तपाईलाई लाग्छ कि प्रत्येक दिन एप्पल साइडर सिरका सेवन गर्दा तपाईको रक्तचाप कम रहन्छ, भने जारी राख्नुहोस्। मदिरा र क्याफिनयुक्त पेय पदार्थहरूको लागि समान, जब सम्म तपाईं उनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नुहुनेछ।
अक्सीकोडोनको तुलनामा न्यूकेन्टा एर १०० मिग्रि
डाक्टर ओसबोर्न बताउँदछन् कि ठिक्क मात्रामा रक्सी पिएर एक देखि दुई पेयले वास्तवमा हृदय घटनाहरूमा सामान्य प्रभाव देख्न सक्छ र कम रक्तचाप पनि देख्न सक्छ, डा। ओसबोर्न बताउँदछन्। जे होस्, यदि तपाईं त्यस भन्दा बढि केहि पिउनुहुन्छ, यसले रक्तचाप स्पष्टसँग माथि पार्दछ।
क्याफिनको समान प्रभाव हुन सक्छ। यो वास्तवमा केही डिग्री vasodilator हो, उनी भन्छन, त्यसैले व्यक्तिगत बिरामीहरुमा प्रभाव धेरै परिवर्तनशील हुन्छ, कुनै परिणाम नतिजा गर्न वा रक्तचाप कम गर्न। नोट: भासोडिलेटरले रक्त वाहिकाहरू खोलेर रगत प्रवाह बढाउँछ।
उच्च रक्तचापको लागि उत्तम प्राकृतिक पूरक के हो?
तीन मुख्य खनिजहरू रक्तचाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि तपाइँ मुटु-स्वस्थ आहार पालना गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ तपाइँको खानाबाट यिनीहरू पर्याप्त पाउनुहुनेछ - तर कमजोर भोजन बानी भएका व्यक्तिहरूको लागि, पूरक राम्रो विचार हो। यी प्रयास गर्नुहोस्:
* केहि पोटासियम पूरक लिन सिफारिस गर्न सक्छ, तर यो विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ तपाईंको हालको पोटासियम स्तर परीक्षण गर्नु अघि। धेरै धेरै पोटेशियमले सम्भावित घातक साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ।
मेरो रक्तचाप कम गर्न म के गर्न सक्छु?
जीवनशैली परिवर्तनको साथ रक्तचाप कम गर्ने तरिका यहाँ छ:
व्यायाम: नियमित दैनिक गतिविधिलाई आफ्नो दैनिक तालिकाको भाग बनाउनुहोस्; प्रति दिन आधा घण्टा पनि स्वास्थ्य बढावा दिन र स्वस्थ वजन प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विशेष गरी एरोबिक व्यायाम भएको छ अध्ययन उच्च रक्तचाप को लागी एक गैर-औषधीय उपचार को रूप मा। कामको सिढीमा जानुहोस् वा तपाईं फोनमा हुँदा वरिपरि हिड्ने प्रयास गर्नुहोस्।
तौल घट्नु : मात्र दुई पाउण्ड गुमाउँदा पनि सिस्टोलिक रक्तचाप कम गर्न सक्छ, डा। डेपल्मा भन्छन्। सामान्यतया, यदि कसैले उसको वा उसको शरीरको वजनको%% गुमाउँछ भने, यसले रक्तचापमा महत्त्वपूर्ण असर पार्छ।
सबै निकोटिनहरू वेवास्ता गर्नुहोस्: यस उत्तेजकलाई यसको सबै रूपहरूमा छोड्नुहोस्, जस्तै धुम्रपान, भ्यापिंग, प्याचहरू, र च्यु।
ड्रग्स त्याग्नुहोस्: मनोरन्जनकारी औषधिहरूले तपाईंको रक्तचापलाई तपाईंको जीवनको प्रत्येक अन्य भागहरूमा थप असर गर्न सक्छ।
तपाईंको औषधिहरूको निरीक्षण गर्नुहोस्: केही औषधी र पूरकहरूले रक्तचाप औषधीको प्रभावकारिता बदल्न सक्छन्।
मानसिकता अभ्यास: यसको साथ कमको साथ तनाव र तपाईंको रक्तचाप कम गर्नुहोस्। गहिरो सास फेर्ने व्यायाम गर्नुहोस् जब तपाईंलाई रक्तचाप बढेको महसुस हुन्छ।
कसरी रक्तचाप छिटो कम गर्ने
पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि तपाईंलाई उच्च रक्तचाप जस्तो कि स्ट्रोक, हार्ट अट्याक, वा अरू केहि जटिलता छ जस्तो लाग्छ भने, तुरुन्त चिकित्सकीय ध्यान खोज्नुहोस्। यस्तै समस्याहरू आफ्नै रूपमा समाधान गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् — तपाईंलाई विस्तृत हेरचाहको आवश्यकता छ।
अन्यथा, जब तपाइँ आफ्नो रक्तचाप धेरै उच्च हुन सक्छ र तपाइँ यसलाई छिटो कम गर्न चाहानुहुन्छ, डा। ओसबोर्न शान्त हुन सुझाव दिन्छन्। तपाइँ के गरिरहनु भएको छ र बस्नुहोस्। केही गहिरो सास लिनुहोस्। यदि तपाईंले फेला पार्नुभयो कि यसले सहयोग गर्दैन भने, त्यसोभए आफ्नो डाक्टरलाई कल गर्नुहोस्। यदि यो एक निरन्तर समस्या हो भने, व्यायाम र तपाईंको आहार परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नुहोस्; यसले तपाईंको रक्तचापमा यसको प्रभावहरू देख्न केही हप्ताहरू वा एक महिना लिन सक्दछ, त्यसैले उत्तम परिणामहरूको लागि टाढा प्लगिन राख्नुहोस्।
दिमागमा राख्नुहोस् कि केहि केसहरूमा, रक्तचाप औषधी आवश्यक हुन सक्छ यदि तपाईं आहार र जीवनशैली परिवर्तनहरू मार्फत उच्च रक्तचाप कम गर्न सक्नुहुन्न। ती औषधिहरू रक्तचापको स्तर कम गर्न द्रुत मार्ग हुनेछ - अक्सर तपाईंको रक्तचाप बाहिर लिन केही मिनेट मात्र लिन्छ। सही औषधि फेला पार्नु केवल केहि केसहरूमा उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्ने एक मात्र तरिका हुन सक्छ, जस्तै प्रतिरोधक उच्च रक्तचाप । औंठाको एक नियम रक्तचाप औषधी सुरू गर्नु र जीवन शैली परिवर्तन गर्नु हो। रक्तचाप जीवनशैलीगत परिमार्जनको साथ सुधार गर्दा, औषधिहरू बन्द गर्न सकिन्छ।
डाईपाल्पमा भन्छन् कि औषधी लिई र स्वस्थ खाना पछ्याउँदा मात्र [उच्च रक्तचाप] लाई कम गर्दैन, तर यसले हृदय रोग, स्ट्रोक र उच्च रक्तचापको अन्य जटिलताहरूको जोखिमलाई घटाउँछ। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले एक औषधि सिफारिस गर्दछ जुन कम सम्भावित साइड इफेक्टको साथ अधिक फाइदा हुन्छ।
तिमी रातमा कति मेलाटोनिन लिन सक्छौ
के म्याद सकिएको हात सेनिटाइजर प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
effexor xr mg 75 मिलीग्राम vs १ mg० मिलीग्राम
एन्टिबायोटिकहरूको सूची जुन सी फरक पार्दछ
के हुन्छ यदि तपाईंले २ 800०० मिग्रि आईबुप्रोफेन लिनुभयो भने
औषधीमा धेरै संख्या कहाँ छ
benadryl गलत सकारात्मक ड्रग परीक्षणको कारण गर्दछ